Mpanamboatra sy mpamatsy ny lojika lozisialy - Orinasa mpamokatra lojika China
Tava tokana Pallet
Ny paleta dia misy dikany roa. Ny voalohany: ny paleta dia teny ampiasaina amin'ny indostrian'ny fandefasana sy ny lojika. Izy ireo dia manondro ireo entana izay nohafarana sy naondrana an-dranomasina na an-habakabaka na fitaterana natambatra teny am-pelatanan'ny tompona entana. Fanontaniana ataon'ny tompona entana izany. Ny tompona entana rehetra dia mila fangatahana mihoatra ny iray isaky ny fangatahana serivisy lojisialy. Ny vidiny dia tsara kokoa noho ny telo. Noho izany, eo ambanin'ny sehatry ny fandraharahana nentim-paharazana, misy palety marobe. Ny karazany faharoa: Pallets, a ...
Ny fitoeram-pako dia fitoeran-javatra fitahirizana fako, izay manana fiasa mitovy amin'ny fako, ary amin'ny ankapobeny dia efa-joro na mahitsizoro. Ny fitoeram-pako isan-karazany dia malaza. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny fiarahamonina, valan-javaboary ary toeram-bahoaka hafa. Ny fitoeram-pako dia hivoatra amin'ny karazana fako maniry vaovao. Ny tsiambaratelo dia ny fisian'ny tionelina ambanin'ny tany sy ny milina pneumatika ao ambanin'ny fitoeram-pako tsirairay ao amin'ny fiarahamonina, toy ny tatatra, eo ambanin'ny asan'ny milina pneumatika. Aut ...
Double -deck Part Name ： Pallet Double-deck D4-1111 Isa: KH170384 haben'ny ampahany: 1100 * 1100 * 140 mm Lanjan'ny ampahany: 19.28kg Pallet Part Feature Pallet dia henjana tokoa amin'ny fametahana, tanjaka flexural, ny tanjaky ny lovia ambany, ny zoro , tanjaky ny enta-mavesatra sns sns. Pallet Dolly mitambatra Pallet Lid Weight mampihena ny filàna miteraka dingana bebe kokoa toa an'i Mucell. Kaihua Technology Pallet bobongolo famolavolana sy fanamboarana Ampahany famolavolana / fanadihadiana CAE / famakafakana mikoriana famolavolana Mucell dingana Pallet Load Be ...
Big Industrial Crate (kinova 5)
Big Industrial Crate (kinova 5) Ampahany habe: 1200 X 1000 X 731mm 1200 X 1000 X 821mm 1200 X 1000 X 547mm bobongolo refy: 2560x2130x1560mm lanja ampahany: 19.28kg Pallet Part Feature Pallet dia tena henjana amin'ny fametahana, tanjaka flexural, ny lovia ambany tanjaka, fihenan'ny zoro, tanjaky ny enta-mavesatra sns sns. Pallet Dolly mitambatra Pallet Lid Weight mampihena ny filàna miteraka dingana bebe kokoa toa an'i Mucell. Kaihua Technology Pallet bobongolo famolavolana sy fanamboarana Ampahany famolavolana / CAE fandinihana / hamolavola mikoriana dian ...
Tote famolavolana voaloboka
Voaloboka famolavolana voaloboka anaran'ny ampahany: Tote famolavolana voaloboka haben'ny bobongolo: 1790X1090X1057 mm bobongolo bobongolo: 11Ton ampahany habe: 710X953X26 mm lanja ampahany: 650g Pallet Part Feature Pallet dia henjana tokoa amin'ny fametahana, tanjaka flexural, ny tanjaky ny lovia ambany, ny zoro, ny enta-mavesatra tanjaka sns Fampifanarahana Pallet Dolly Pidet Lid Weight mampihena ny filàna miteraka dingana bebe kokoa toa an'i Mucell. Kaihua Technology Pallet bobongolo famolavolana sy fanamboarana Ampahany famolavolana / fanadihadiana CAE / famolavolana ny fantsom-pamokarana Muce ...
Dustbin 360L Ampahany ampahany: 867 X 751 X 1059 mm haben'ny bobongolo: 1795X1695X1865 mm bobongolo bobongolo: 44345 kg Masinina: HT 3300T Vahaolana sy famolavolana bobongolo ho an'ny fako, paleta, vata sns Ny ankamaroan'ny bobongolo dia aondrana amin'ny mpanjifa any amin'ny tsenan'i Eropa sy Amerika . Amin'izao fotoana izao dia afaka manome mavesatra bobongolo mavesatra hatramin'ny 90T isika. Afaka manamboatra bobongolo vovoka isika manomboka amin'ny 40L ka hatramin'ny 3200L. Miaraka amin'ny traikefa manankarena azontsika isan-taona, ny lasitra azontsika dia mety hanana fotoana fohy sy vanim-potoana lava be. Afaka manome m ...
Dustbin 240L Ampahany ampahany: 734 * 585 * 1034mm haben'ny bobongolo: 1200 * 1350 * 1615mm bobongolo bobongolo: 20830kg Masinina famokarana: 2500T Vahaolana sy famolavolana bobongolo ho an'ny fako, paleta, vata sns Ny ankamaroan'ny bobongolo dia aondrana amin'ny mpanjifa any Eropa sy Amerika tsena. Amin'izao fotoana izao dia afaka manome mavesatra bobongolo mavesatra hatramin'ny 90T isika. Afaka manamboatra bobongolo vovoka isika manomboka amin'ny 40L ka hatramin'ny 3200L. Miaraka amin'ny traikefa manankarena azontsika isan-taona, ny lasitra azontsika dia mety hanana fotoana fohy sy vanim-potoana lava be. Afaka manome ...
Dustbin 120L Ampahany ampahany: 552 * 480 * 899 mm haben'ny bobongolo: 1050 * 1100 * 1479mm bobongon'ny bobongolo: 13315kg Masinina famokarana: 2400T Vahaolana sy famolavolana bobongolo ho an'ny fako, paleta, vata sns Ny ankamaroan'ny bobongolo dia aondrana any amin'ny mpanjifa any Eropa ary Tsenan'i Amerika. Amin'izao fotoana izao dia afaka manome mavesatra bobongolo mavesatra hatramin'ny 90T isika. Afaka manamboatra bobongolo vovoka isika manomboka amin'ny 40L ka hatramin'ny 3200L. Miaraka amin'ny traikefa manankarena azontsika isan-taona, ny lasitra azontsika dia mety hanana fotoana fohy sy vanim-potoana lava be. Afaka manome ...
110L Dustbin ampahany habe: 552 * 480 * 899 mm haben'ny bobongolo: 1050 * 1100 * 1479mm bobongolo bobongolo: 13315kg Masinina famokarana: 2400T Vahaolana sy famolavolana bobongolo ho an'ny fako, paleta, vata sns Ny ankamaroan'ny bobongolo dia aondrana any amin'ny mpanjifa any Eropa ary Tsenan'i Amerika. Amin'izao fotoana izao dia afaka manome mavesatra bobongolo mavesatra hatramin'ny 90T isika. Afaka manamboatra bobongolo vovoka isika manomboka amin'ny 40L ka hatramin'ny 3200L. Miaraka amin'ny traikefa manankarena azontsika isan-taona, ny lasitra azontsika dia mety hanana fotoana fohy sy vanim-potoana lava be. Afaka manome ...